Manni barnootaa dhaabbata amantaatiif paastar Yoonaataan bite komii kaasise - ዜና ከምንጩ
Manni barnootaa dhaabbata amantaatiif paastar Yoonaataan bite komii kaasise
Paastar Yoonaataan Akliluu biteera kan jedhameefi naannawa Hospitaala Kooriyaa Garjiitti kan argamu mana barnootaa Imbux nama dhuunfaafi manneen gandaa naannawichatti argaman babal’isuuf jecha fudhachuuf kan jiru ta’uunsaa komii kaasiseera.
Paastar Yoonaataan iddoo manni barnootaa irratti argamu darbuudhaan manneen jireenyaa namoota dhuunfaa hayyama isaanii malee nan fudhadha jechuunsaa komii akka itti uume jiraattonni naannawichaa Addis Maaladaatti himaniiru.
Manni barnootaa Yoonaataan biteera jedhame kun birrii miliyoona 60’tti kan gurgurame yoo ta’u waggaa tokkoon dura cufamuudhaan wayita ammaa dhaabbata amantaa ta’uun tajaajilaa jira.
Kaabineen bulchiinsa magaalaa Ebila 5/2013 iddoo babal’isuu hayyama abbootii malee akka kennamuuf murteessuusaa Addis Maaladaan beekuu dandeessee jirti.
Kanneen komii dhiyeeffatan kan biteef hin kenninu kan jedhan magaalaa Addis Ababaa kutaa magaalaa Boolee aanaa 13 naannawa Gaaraajii Alaminah kan jiru walumaa galatti lafa kaaree meetira kuma 2fi 900 yoo ta’u abbootiin iddoo kana waggoota hedduuf kan jiraatanidha.
Kanneen komii dhiyeessan waa’ee murtee utuu hinbeekin waajjirri misooma lafaa kutaa magaalaafi qondaaltoonni aanichaa waxabajjii 30/2013 qabiyyeen isaanii bataskaana idil addunyaa waadaa haaraa bataskaana warra wangeelaa Itiyoophiyaatiif waan kennameef iddoo kana kennuudhaan akka gadi lakkisaniif itti himamuu Addis Maaladaan beekuu dandeessee jirti.
Iddoo kana akka gadi lakkisaniif erga itti himamee booda manneen jireenyaa namoota jahaa olii,mana afooshaa,qabiyyichaaf kaartaa sanada mirkansaa kan qabu Gaaraajii guddaafi manneen gandaa keessatti argamu.
Manneen jireenyaa namoota dhuunfaa kun kaartaa qilleensa irraa yeroo dhiyoo ka’e kan qaban yoo ta’u kaabineen bulchiinsa magaalaa hojii babal’isaaf kan hayyame manneen 80 dursuudhaan kaartaa qilleensaa qaban irrattidha.
Kana irratti bu’uraawuudhaaniifi gaaffiiwwan kanneen biroo qabachudhaan jiraattonni torban darbe itti aantuu kantiibaa bulchiinsa Magaalaa adde Adaanach Abeebee bira dhaquudhaan iyyatasaanii dhageessifatanii turan.
Labsii lakkoo.1161/2012 faayidaa ummataatiif jedhamuun hojiin misoomaa gadi lakkifamuu danda’u karaa kallattiifi al-kallatiitiin misooma hawaas-diinagdee cimsuuf kan ragga’e akkaataa qajeeltoo pilaanii karoora misoomaafi itti fayyadama qabeenya lafaa(Structural Plan)faayifdaa waloo ummataafi guddina fida jedhamuun kan murtaa’e yoo ta’e akka ta’e odeeffannooleen jiran nimul’isu.
Kanneen bulchiinsa magaalaatiif komii dhiyeessan jidduudhaa’seerri kan jedhu kaafamtoonni misoomaa humna misoomsuu yoo qabaachuu baatan dabarsuu akka qabanidha’kan jedhan kanneen komii dhageessifatan naannawicha humna qabaniifi sadarkaa misoomaa barbaachisuun misoomsuuf socho’aa akka jiru Addis Maaladaatti himaniiru.
Kana malees danbii lakkoofsa 472/2012 keewwata 3fi 8 irratti akka jedhutti biiroon bulchiinsa misooma lafa magaalaa yaada murtee dhiyeessuu isaatiin dura qaamoleen qabiyyee irratti mirga qaban akka mari’atan taasisuun dirqama akka ta’e utuu beekamuu utuu hin mari’achiisin hafuunsaa sirrii akka hin turre kaasan.
Kanneen komii dhiyeessan labsii lakkoofsa 1161/2012 fi danbii lakkoofsa 472/2012 kan misoomaaf ka’u qabiyyee isaa irraa ka’uusaatiin dura haal-dureewwan raawwatamuu qabaniifi haala kaffaltii beenyaa,akkasumas akkaataa lafti bakka bu’uun kennamu yaadawwan haarawa seera kanaan duraa keessa hin jirre ida’uudhaan mirga kaafamtootaa kabajisiisuuf seerawwan sirna ittiin danda’amu diriirsan akka ta’an ibsaniiru.
Garuu labsiin lakkoofsa 472/2012 iftoomaan labsii lakkoofsa 455/1997 haqeera.Akkasumas danbiin lakkoofsa 472/2012 iftoomaan danbii lakkoofsa 135/1999 haqeera.
Kanaafuu bulchiinsi kutaa magaalaa labsii lakkoofsa 1161/2011 fi danbii lakkoofsa 472/2012’n qajeelfamni akka ba’u taasisuun raawwachiisuu utuu qabuu qajeelfama haqameen keessummeessaa kan jiru ta’uunsaa haqa qabeessa miti jedhaniiru.
Gaaffiin ijoon komattootaas yaadni murtee kaabineedhaaf kan dhiyaate amma qabatamaan dhugaa qabiyyee irra jiru kan hin hubanne,inumaatuu kaabineen murtee haqaan alaa akka murteessuuf odeeffannoo dogongoraa irratti kan bu’uraaye akka ta’e Addis Maaladaan beekuu dandeessee jirti.
Kanneen komii dhiyeessan guyyaa 15/2013 gara bulchiinsa misooma lafaa deemuudhaan ulaagaa maaliitiin hojiin babal’isuu akka hayyamame gaafachuun isaanii beekameera.
Addis Maaladaan mana barnootaa kan bite paastar Yoonaataan Akliluu akkasumas abbaa qabeenyichaa dubbisuuf irra deddeebiidhaan bilbiltus deebii argachuu hin dandeenye.
Total views : 7537780